ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk China Manufacturer
attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk,ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ semi-ချောထုတ်ကုန်များ,အမြင့် Titer နဲ့ Immunization ထိရောက်မှု
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP ဖေါ်ပြချက်: attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk,ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ semi-ချောထုတ်ကုန်များ,အမြင့် Titer နဲ့ Immunization ထိရောက်မှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး (တိုက်ရိုက်) > ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk
 ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး, တိုက်ရိုက် Semi-ချောထုတ်ကုန်များ၏ bulk
gelatin-အခမဲ့၏ 1.Good ဘေးကင်းလုံခြုံရေး
တိရိစ္ဆာန်များကိုမခံမ gelatin င်ပထမဦးဆုံး lyophilized ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး, တီထွင်ခြင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကနေ gelatin ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရယူခြင်းသိသိသာသာ  ှားပါးဖြစ်ပွားမှု၏အချိုးကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုအားဖြင့် 2. Long ကတရားဝင်မှုကာလ
မြင့်မားသော titer နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားထိရောက်မှုနှင့်အတူ 3. သာ. ကောင်း၏ကာကွယ်မှု
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ semi-ချောထုတ်ကုန်များ , အမြင့် Titer နဲ့ Immunization ထိရောက်မှု , Attenuated Lyophilized တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk , bulk တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံး bulk , ဘိုင်အိုဆေးဝါးကာကွယ်ဆေး attenuation , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး